वीपी प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी – BFM 91.2
February 17, 2021 February 17, 2021 Bfm	0 Comments
विराटनगर, ५ फागुन । तीन वर्षदेखि चिकित्सक बढुवा रोकिएको भन्दै सुनसरी धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा आज तालाबन्दी गरिएको छ । माग सम्बोधन नभएपछि तालाबन्दी गर्नुपरेको चिकित्सक तथा दन्त चिकित्सा कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले बताउनुभयो ।
चिकित्सक तथा दन्त चिकित्सा कल्याण समाजले उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो । ३–३ महिनामा बढुवा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको र पछिल्लो समय ६ महिनामा बढुवा गरिँदै आएको चिकित्सा कल्याण समाजले जनाएको छ ।
समाजका अनुसार पछिल्लो समय ३ वर्ष देखि बढुवा रोकिएको छ । कोरोनाको उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरूलाई कोरोना भत्ता अझै उपलब्ध नगरेको चिकित्सक तथा दन्त चिकित्सा कल्याण समाजले केही दिन अघि देखि आन्दोलित रहेको पूर्व महासचिव डा. मधुर बस्नेतले बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानमा सुविसुको इन्टरनेटमा व्यापक घोटाला भएको र विद्युतमा समेत घोटाला भइरहेको लगायतको मुद्दा उठाएर आन्दोलनरत रहेको समाजले १८ दिन अघि शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको थियो ।
← विपद सूचनाको व्यवस्थापन
वीएफएमद्धारा आयोजित खुल्ला गजल प्रतियोगिताका लागि २८ वटा गजल छनौट →